‘जीवनसाथी’ भित्र्याउने कि ‘नोकर्नी’ ? « News24 : Premium News Channel
‘जीवनसाथी’ भित्र्याउने कि ‘नोकर्नी’ ?
‘राम्रो पढ्छु, आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिन्छु, जीवनमा केही गर्नु छ, पुरूष भन्दा महिला कम हुनुहुँदैन, अरूसित आश्रित हुनुहुँदैन, आश्रित भयो भने हेप्छन् ।’ अहिलेका प्राय सबै महिलाहरू यसै भन्छन् । तर विडम्बना के छ भने पुरूष भन्दा महिला कम्जाेर नभए पनि श्रीमान भन्दा श्रीमती चाहिँ किन कम्जाेर नै हुन्छन् । महिला पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा हुँदा श्रीमान् र श्रीमती चाहिँ एक रथको दुई पाङ्ग्रा भएकाे खासै देखिँदैन।
अञ्जली (नाम परिवर्तन) उनी कम्जाेर महिला थिइनन् तर अहिले उनले आफैले आफैलाई कम्जोर महसुस गरेकी छिन् । उनी किन कम्जाेर भइन् ? आफैले आफैलाई किन कम्जाेर महसुस गरिन् ?
कक्षा ११/१२ पढ्दाको मेराे सबै भन्दा मिल्ने साथी अञ्जली । अहिले उनकाे घर काडाँघारीमा छ, विवाह भएकाे पाँच वर्ष भयाे, परिवार सम्पन्न/ खानदानी छ । उनले श्रीमन पनि राम्राे जगिरे पाएकी छिन्, डाक्टर । भक्तपुरको एक हस्पिटलमा काम गर्छन् ।
उनीसँग भेट नभएकाे पनि पाँच वर्ष नै भएकाे थियाे । गत असार तीन गते मात्रै उनीसँग भेट हुने मैका मिल्याे, उनकाे जन्मदिनकाे अवसरमा । असार तीन गते मंगलबार परेकाे थियाे । मंगलबार मेरो लागि शनिबार हाे अर्थत अफिस बिदाकाे दिन, आठ बजे मात्रै उठे । उठेर केही कपडाहरुल धोए, नुहाए । त्यसपछि खान खाएर फेसबुक खोलेको मात्रै थिए अञ्जलीलाई अनलाइनमा देखे, उनललाई फेसबुकबाटै जन्मदिनकाे शुभकामना दिए ।
विवाह अघि उनको जन्मदिन खुब रमाइलो गरी मनाइन्थ्यो । पहिला मनाएको उनको जन्मदिनको खुब याद आयो र उनलाई भेट्न मिल्छ ? भनेर प्रश्न गरे । उनले एक घण्टा जति मिल्ने बताइन् । उनको घरमै जान अप्ठयारो लाग्यो, बाहिर नै भेट्ने प्रस्ताव गरे उनले पनि मानिन् ।
एक घण्टाको अवधिमा उनले पाँच वर्षको सबै मनको कुरा पोखिन् । उनलाई साह्रो न्यास्रो लागेको रहेछ । कक्षा १२ को परीक्षापछि उनको काेही साथीहरूसँग पनि भेट भएको रहेनछ ।
जन्मदिनको खुसी सेयर गर्न गएको म अन्त्यमा मन खिन्न बनाउँदै फर्कनु पर्‍यो, उनको कुरा सुनेर । उनले पहिलो पटक दुखेसो पोखेकी भने होइनन्, कहिलेकहीँ फेसबुकमा कुरा हुँदा पनि पोख्थिन् ।
गत फागुन १४ गते उनलाई फेसबुकमा नै एनिभर्सरी (विवाह वर्षगाठँ)को शुभकामना दिएको थिए । तर उनी म देखि रिसाएकी थिइन । उनलाई सोधे अस्ति एनिभर्सरी शुभकामना दिँदा किन रिसाएकी ? उनले भनिन्, ‘त्यो मेराे एनिभर्सरी होइन, नोकरभर्सरी हो, त्यो दिनदेखि नोकर्नी भएर बस्न परेको छ, त्यो दिन त सम्झिन पनि नपरोस् ।’ त्यो बेला भनेको कुराले उनले माफीसमेत मागिन् ।
२०७१ साल फागुन १४ गते उनले नचाहँदा-नचाहँदै उनकाे विवाह भएको थियो । धर्म, संस्कृति, सामाजिक पृष्ठभूमि मिल्ने र खानदानी केटो माग्न आएपछि उनका बुबाआमाले उनकाे इच्छाविपरित नै उनकाे परिवारले विवाह गरिदिएका थिए ।
हुन त हाम्रो समाजमा हेर्ने भनेको आर्थिक स्थिति र पढाइलेखाई हाे । आर्थिकस्थिति राम्राे, पढेलेखेका र राम्रो जागिर भएको केटो माग्न आए भने छोरीकाे इच्छा के छ भनेर नसाेधि नै अभिभावकले विवाहकाे मिती ताेकिदिन्छन् ।
अञ्जलीलाई पनि डाक्टर केटाे माग्न आएपछि उनकाे आमाबुबाले पनि नाई भन्न सकेनन्, अञ्जलीकाे इच्छाविपरित नै विवाह गरिदिएका थिए । अञ्जलीकाे हात माग्न आकाश अधिकारी (नाम परिवर्तन) आएका थिए । उनले चीनमा भर्खरै एमबिबिएस सकाएर नेपाल फर्किएका थिए । आकाश डाक्टर भएकै कारण अञ्जलीकाे अभिभावकले उनलाई नसाेधि नै विवाहकाे गराइदिएका थिए ।
आकाश, अञ्जलीको अभिभावक नजरमा योग्य व्यक्ति थिए । तर अञ्जली भने आकाशलाई राम्रोसँग बुझेका थिएनन् । आकाशले पनि अञ्जलीलाई राम्रोसँग बुझेका थिएनन् । अञ्जलीले आफ्नो अभिभावकलाई आफूले चाहेको के हो भन्ने कुरा खुलस्त बताउन पनि पाएका थिएनन् ।
अञ्जलीले र आकाशको बिहे धूमधामसँग भएको थियो । जन्ती मात्रै तीन/चार सय ल्याएका थिए । अञ्जलीको विवाहलाई सबैले ‘गाउँकै ठूलो विवाह’ भएको भनेका थिए । खानदानी परिवार त्योमाथि पनि डाक्टर केटो, अञ्जली बेहुली हुँदा गहगहरनाले पूरै ढाकिएकी थिइन् । बेहुला-बेहुली दुवै पक्षामा ठूलाे भोज भएकाे थियाे । अञ्जलीले पछि सुनाइन्, विवाहमा सम्पूर्ण खर्च ४०/५० लाख भयो रे ।
आकाशले आफ्नो समाजसेवा गर्ने इच्छा पनि पूरा गर्न दिने अञ्जलीले बताएकी थिइन् । समाजसेवी बन्ने, राजनीति गर्ने, देश बदल्ने, समाज बदल्ने, महिलाहरूको अन्यायको निम्ति लड्ने उनकाे सानैबाट सपना थियो । कलेजको रेडक्रस अध्यक्ष पनि उनी नै थिइन । उनले भन्थी- ‘राम्रो पढ्छु, आफ्ना खुट्टामा आफैँ उभिन्छु, अरूसित आश्रित भयो भने त हेप्छन्, महिलाहरूकाे लागि एउटा खम्बा भएर उभिनु छ ।’
तर अहिले अञ्जली घरसेवीमा तल्लीन छिन् । बिहान पाँचबजेदेखि बेलुका १० बजेसम्म घरको काममा गर्दा हातहरू पट्टपट्ट फुटेको छ । बिहान पाँच बजे उठेर घर पोछा लगाउनेदेखि बेलुकाको खाना खाएका भाँडाकुँडा धुनेसम्म सबै उनकै जिम्मा छ । यता दुई वर्षको बच्चा पनि छ । बच्चालाई पनि हेर्नै पर्‍यो ।
घरकाे काम समयामा नसकिँदा हाेस् या बच्चा रूँदा उनले नै गाली पाउछिन् । उनले भनिन्- ‘बच्चा राेयाे भने पनि सुत्नेलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्दै कराउँछन् ।, एउटा बच्चा पनि हेर्न सक्दिनस् भन्दै कराउनुहुन्छ ।’
उनको याे पीडा कसले देख्ने ? जसलाई उनले आफ्नो आधा जीवन सुम्पिन्, एउटै छानोमुनि बस्छन्, एउटै ओछ्यानमा सुत्छन्, उसलाई त केही मतलब छैन । आकाशलाई अस्पतालको बिरामीको हेरचाह गर्दा नै ठिक्क छ, अरू घरको सदस्यालाई त के मतलब ।
आकाशले विवाह अघि गरेकाे बाचा अञ्जलीले नसुनाएको पनि होइनन् तर आकाशले उल्टै थर्काउछन्- ‘तेरो लेक्चर सुरु नगर’ भनेर । उनले भनिन्, ‘आकाशलाई त घरमा कम गर्ने मान्छे चाहिएको रहेछ त्यसैको लागि मात्रै विवाह गरेका रहेछन्, म आकाशकाे जीवन साथीको रूपमा भन्दा पनि नोकर्नीको रूपमा बसिरहेकी छु, अरूले जे गर भन्यो त्यही गर्नुपर्छ ।’
अञ्जलीले अहिले घरको संघार नाघेर बाहिर आएर विद्रोह गर्न पनि सक्दिनन् । त्यसैले आफूलाई खुम्चाएर बाचिरहेकी छिन् । उनी माइती घर नगएको पनि दुई वर्ष भयो ।, उनले भनिन्, ‘तीज, दशैं-तिहारमा खुब माइती जान मन लाग्छ तर यहाँ आफ्नो पाहुँना टार्न नै भ्याइनभ्याई हुन्छु, माइती त कसरी जानु र ?’
भन्छन्, ‘माटोलाई ढुङ्गाको भर ढुङ्गालाई माटोको’ तर आकाश अञ्जलीको भर कहिल्यै भएनन् । उनले अञ्जलीको सपना कहिल्यै बुझेनन् । यता सासू-ससुरालाई त झनै के वास्ता हुन्थ्यो र ?
अझ सासू त बुहारीले टाउकाेमा टेक्छिछन् भनेर बेलाबेला छाेरालाई नानाथरी कुरा लगाउछिन् । अञ्जली र उनकाे सासूको सम्बन्ध निकै नाजुक छ । हुन त हाम्राे समाजमा नै सासू आमा हुन र बुहारी छोरी हुन सक्दैनन् भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।
प्राय धेरै सासूहरूले बुहारीले गरेका हरेक काममा कमजोरी, गल्ती देखाएर अरूसँग बुहारीको कुरा काट्ने, कराउने, छोरालाई कुरा लगाउने आदि र्गने गरेका पाइन्छ । ‘अर्काकी छोरी न हो’ भन्दै घरमा काम गर्ने ल्याएको नोकर्नी जस्तो गर्छन् ।
छाेरी अन्माएर अर्काको घर पठाएपछि दु:ख पाउछे भन्दै रूनेहरू बुहारी घरमा भित्राउँदा पनि दु:ख पाउछे भन्दै चिन्ता किन गर्दैनन् ? आफूले चाहिँ बुहारीलाई घरमा सक्दो पेलेर आफ्नी छोरी कसैकी बुहारीको चिन्ता गरेर मात्रै कसरी महिला हिंसाको अन्त्य हुन्छ ?
महिलाको दुई वटा आमाबुबा र दुई वटा घर हुन्छ भन्छन् । आफ्नो जन्मघरकाे आमाबुबा र कर्मघरको आमाबुबा, जन्मघर र कर्मघर । जन्मघरका आमाबुबाले झुक्नै नहुने शिक्षा दिइरहेका हुन्छन् भने कर्मघरका आमाबुबाले लम्पसार परोस् भन्ने चाहन्छन् ।
जन्मघरकाेले ‘खुब मातेकी छस्, सासू कस्ती पर्ने हो ? आमा जस्तो हुँदैनन् सासू’ भनिरहेका हुन्छन् भने कर्मघरकाले ‘छाेरी जस्ताे कहाँ हुन्छ र बुहारी ? छाेरा त सद्दे थियाे, बुहारी कस्ती आउछिन् ? भनिरहेका हुन्छन् । बुहारीलाई पनि आफ्नै छोरीजस्तो माया गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैले पनि साेचेका हुँदैनन् ।
घरमा काम गर्ने मान्छे चहिएको छ भने सिधैँ ‘नेकर्नी’ चाहिएको छ भन्न चाहिँ सक्दैन तर घुमाइफिराई कुरा गरेर बुहारीको रुपमा घरमा काम गर्ने मान्छे खोजीरहेका हुन्छन् ।
‘छोरीले धेरै पढ्नु पर्छ, नपढे अरूले हेप्छन् । अरूको हेपाई सहनु हुँदैन भन्नेले बुहारीले चाहि टाउकाेमा टेकेछन् भनेर सधैँ दबाएरै राख्ने ? छाेरी कुनै कार्यक्रममा गएर नाच्न, गाउन सक्छिन् भने बुहारीले चाहिँ किन सक्दैनन् ? छोरीहरूको लागि मनोरञ्जन गर्ने क्लब, आउटिङ, फिल्म हुँदा बुहारीहरूको लागि त्यो मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ किन बन्दैन ?
सबै बुहारी छोरी भन्दा नराम्रो हुँदैनन् । बुहारी छोराभन्दा कैयौँ गुण सबल पनि हुन सक्छे । ज्वाइँले छोरीलाई घरको काम सघाउँदा खुसी हुने हामी छोराले बुहारीलाई सघाउँदा जोइठिंग्रे कसरी हुन्छ ?
आफ्ना छोराछोरीले गर्ने जस्तोसुकै गतल कार्यहरू सजिलै स्वीकार सक्ने हामीले बुहारीले कहिलेकहीँ गल्तीले गरेको गल्तीलाई पनि स्विकार्न सक्नुपर्छ ।
‘महिला पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा’ भन्छन् । एक अर्काका साथ पाएरसम्म समाज बिकसित,सभ्य,अर्थपूर्ण र शान्तिपूर्ण हुँदैनन् । महिला कसै न कसैकी आमा, दिदीबहिनी, स्वास्नी, साथी वा कुनै आफन्त हुन् । उनी कमजोर हुनु भनेको घर कमजोर हुनु हो, पुरुष कमजोर हुनु हो र समाज कमजोर हुनु हो। त्यसैले महिलाहरुले आफ्नो सोचलाई कमजोर बनाएर कमजोर हुनुहुँदैन,उनीहरुलाई कमजोर बनाइनु पनि हुँदैन।